मंगलबार, वैशाख २८, २०७८ ०६:५२:३८
आठबीसकोटको राडिमा केन्द्रीय प्रशारण लाईन, केहि दिनमा घर घरमा वत्ति बल्ने ८ वडाका करिब ५ हजार घरमा बत्ति बल्दै ।
रुकुम पश्चिमको आठबीसकोट नगरपालिका ९ राडिमा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत पुगेको छ । नगरको प्रशासनिक केन्द्र वडा नं. ९ को राडिमा पहिलो पटक केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत पुगेको हो । मुख्य लाईन मार्फत राडिसम्म विद्युत पुगेको र अव घर घरमा विस्तारको काम बाँकी रहेको छ । नगर प्रमुख गोर्खवहादुर केसीले मुख्य लाईन राडिमा पुगिसकेको र ट्रान्सफर्मरमा बत्ति बालेर परीक्षण समेत गरिएको बताउनुभयो ।
मुख्य लाईन मार्फत अव गाउँ गाउँ तथा घर घरमा विद्युतिकरणको काम भइरहेको उहाँको भनाई छ । केहि दिनमा घर घरमा बत्ति बल्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘गाउँ गाउँमा तार विस्तारको काम भइरहेको छ, मिटरको आवेदन पनि संकलन भइरहेको छ, तत्कालै घर घरमा बत्ति बाल्ने गरी काम भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो ।’
नगरका वडा नं. ७ देखि १४ सम्मका वडावासीलाई लक्षित गरेर केन्द्रीय प्रशारण लाईनको विद्युत विस्तारको काम भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ । यि वडाका अधिकांश घरमा बत्ति बाल्ने लक्ष नगरपालिकाले लिएको छ । करिब ५ हजार घरधुरीमा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको बत्ति बल्न लागेको नगर प्रमुख केसीको भनाई छ ।
हाल यि मध्ये केहि ठाउँमा स्थानीय गिजागार लघु जलविद्युत आयोजना मार्फत बिजुली बत्ति पुगेको छ । तर यस आयोजनाको सेवा भरपर्दो नहुँदा उपभोक्ताले मार खेप्दै आएका छन् । अधिकांश ठाउँमा त विद्युतको पहुँच नै पुग्न सकेको छैन् । घर घरमा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको बत्ति बलेमा यि ८ वडाका नागरिकहरु पहिलो पटक केन्द्रीय प्रशारण लाईनमा जोडिने छन् । जिल्लाको विकट स्थानीय तहका रुपमा रहेको यस नगरपालिका केहि महिना अगाडि मात्र केन्द्रीय प्रशारण लाईनमा जोडिएको थियो ।
वडा नं. ३ मा केहि समय अगाडि मात्र केन्द्रीय प्रशारण लाईन पुगेको थियो । नगरपालिकाले नगरभरमा केन्द्रीय प्रशारण लाईनलाई विस्तार गर्ने लक्ष लिएको बताएको छ । यो आर्थिक वर्षभित्र अधिकांश ठाउँमा केन्द्रीय प्रशारण लाईनको बत्ति बाल्ने नगर प्रमुख केसीले दाबी गर्नुभयो ।
प्रकाशित मिति: बुधबार, वैशाख १५, २०७८, १३:१५:००